रावलको धम्कीले ओली फिटिक्कै डराएनन - Sankalpa Khabar
काठमाण्डौं । शुक्रवार नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको वैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले दस वुदे सहमतिको औचित्य छैन भने । तर,दस वुदे सहमति कार्यान्वयनको लागि वनाएको कार्यदलको संयोजक भीम रावल भने सोही वैठकमा थिए । उनीतिर हेरेरै ओली यसको औचित्य छैन भनेपछि रावल कार्यदलको संयोजक भएर वस्नुको कुनै औचित्य हुने नै थिएन । यसैले उनले राजीनामा दिएका होइनन,राजीनामा दिन वाध्य भएका हुन । राजीनामा दिएपछि साँझ उनले लेखे–एमालेको एकता जोगाउन वार्ता,सहमति,कमिटी बैठक र कार्यदलमा इमान्दारीका साथ भरमग्दुर प्रयास गरें।१० बुंदे सहमतिको कार्यान्वयनमा जोड दिएँ।तर आज स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी अध्यक्षबाट नै १०बुंदे सहमतिको अ‍ौचित्य नरहेको धारणा प्रकट भएपछि फरक मत दर्ज गर्दै कार्यदलबाट राजीनामा दिएको छु।
तर कुरा यति मात्र चाहि होइन । विहिवार वसेको स्थायी कमिटीको वैठकमा पनि वातावरण शान्त थिएन । किनभने विहिवार दिउसो नै वागमती प्रदेश कमिटीको भेलालाइ उनले सम्वोधन गर्दै दस वुदे भनेर टयाउँ टयाउँ कराउनुको अर्थ छैन भनिसकेका थिए । उनले भनेका थिए–माधव नेपाल आउँछन कि भनेर पो दस वुदे गरेको । अर्थात केपी ओली प्रष्ट थिए । नेकपाबाट एमाले र माधव नेपाल अलग हुन्छ भन्नेमा उनी जति प्रष्ट थिए,माधव नेपाल एमालेबाट अलग हुन्छन भन्नेमा पनि उनी प्रष्ट थिए । कुरा कतिसम्म उनी प्रष्ट थिए भने भीम रावलहरु पनि एमालेमै रहन्छन भन्ने पनि उनलाइ लागेकै थियो । यसैले पिलो निचोरियो खिल वाँकी छ भनेर भाषण यति कै गरेका होइनन ।
रावललइ पनि दस वुदे केही हुदैन भन्ने लागेकै थियो । उनी भ्रममा थिएनन । तर,माधव नेपालहरुसंग अलग भएर एमालेमै रहनको लागि उनलाइ एउटा फेस मास्क चाहिएको थियो, ओलीले दस वुदे तयार पारेर रावल र घनश्याम भुषालको मुखमा लगाइ दिएका मात्र थिए ।
तर,दस वुदे पालना नगर्दा भीम रावल र घनश्याम भुषाल रिसाउन सक्छन भन्ने उनलाइ थाह थियो र पनि किन पालना गरेनन ओलीले ? केपी ओलीलाइ रावल र भुषाल रिसाउँछन भन्ने मात्र थाह छैन,यिनिहरु रिसाएर पनि केही हुदैन भन्ने पनि थाह छ । किनभने सुदुरपश्चिमको इन्चार्ज नपाएको झोंक फेरेका रावल ओलीसंग रिसाएर कहाँ जान्छन ? उनले अधिकत गर्न सक्ने के हो ? यसको आंकलन ओलीले गरिसकेका छन । यसैकारण लेखराज भटटलाइ नै सुपको इन्जार्च दिएका हुन ।
र,महत्वपुर्ण कुरा के हो भने ओलीले माधवबाट छुटिटएर आएका दस भाइलाइ विटुलो वनाइसके,र विकल्पहिन पनि । उनले दस भाइलाइ फुटाएनन मात्र,विटुलो पनि वनाइसके ।
१८ मंसिर १३:५१
अफगानिस्तानको तैमानी क्षेत्रमा विस्फोट
१८ मंसिर १५:१८
१८ मंसिर १५:३६
कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशन : संस्थापन पक्षमा विभाजित
१७ मंसिर १४:०८
१७ मंसिर १६:२२
जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजामा ‘कुटी, गुञ्जी र नाभी’को जनसङ्ख्या पनि…
१४ मंसिर १६:४३
राप्रपा अध्यक्षका लागि राजेन्द्र लिङ्देनद्वारा उम्मेदवारी दर्ता
१७ मंसिर १३:२०
१४ मंसिर १७:१५